Public Health in Myanmar: ကြွက်နို့ဟု ခေါ်သော Wart ရောဂါ
Contributor တယောက် တိုးလာတာ ၀မ်းသာပါတယ် ဆရာ သက်တန့်ချို။ တဆက်တည်းမှာပဲ C-Box က မေးခွန်းတချို့ကိုလည်း အချိန်ရရင် လိုရင်းတိုရှင်းလေး ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ၈နှစ်သမီးအရွယ်လောက်က လက်ခလယ်မှာ ကြွက်နို့တလုံးပေါက်ဖူးတယ်။ ၃၊၄လလောက်ကြာတဲ့ထိ
မပျောက်တော့ အိမ်နားချင်းတယောက်က ပြောလို့ ကြက်အမြစ်အရေခွံနဲ့
ပျောက်သွားတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆေးခန်းအလွယ်တကူ မပြနိုင်ခဲ့တုန်းက ဆေးမြီးတိုနဲ့
ကြွက်နို့ဟု ခေါ်သော Wart ရောဂါ ကိုအသုံးပြုသင့်တဲ့ဆေးတွေပါစုံစုံလင်လင် သိတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါက်တာသက်တန့်ချိုကို တခုထက်ပြီးမေးချင်မိပါတယ်။ မေးခွင့်ပြုပါ။ ငါးမျက်စိ နဲ့ ကြွက်နို့က ဘယ်လိုကွာတာလည်းမသိဘူး။ အတူတူပဲလား။ ငါးမျက်စိ က ကြွက်နို့ နဲ့ပေါက်တဲ့နေရာချင်းတူနေတယ်။ မင်းနိုင် သူငယ်ချင်းတယောက်က ခြေဖ၀ါးမှာငါးမျက်စိ ပေါက်နေတယ်။ အရမ်းနာတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒေါက်တာသက်တန့်ချို သိရင်ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသက်တန့်ချို ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ......
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုကျော်မင်းနိုင်ရေ...ငါးမျက်စိနဲ့ ကြွက်နို့က ဆင်တူပေမယ့် ကြွက်နို့က အခိုင်လိုက် ပေါက်တာများပါတယ် ။ ငါးမျက်စိကတော့ လက်ဖ၀ါး ခြေဖ၀ါး နဲ့ ဖနောင့်တွေမှာ လက်အဆစ်လေးတွေမှာပေါက်လေ့ရှိပါတယ် ။ သူက နာကျင်မှုလည်း ရှိပါတယ် ။ သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် အလယ်မှာ အမည်းစက်လေးတွေ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ ကြွက်နို့ကတော့ စူတက်နေပြီး အခိုင်လိုက်ပြွတ်နေတတ်ပါတယ် ။2ခုလုံးကို surgery လုပ်လို့ရပါတယ် ။ ငါးမျက်စိက ပိုကုရတာလွယ်ပြီး ဆေးပလာစတာ (အလယ်မှာ အနီမှုန့်လေးတွေပါ) ကပ်လည်းရပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ် Salicylic acid ပါတဲ့လိမ်းဆေးတွေကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်လိမ်းပေးလည်းရပါတယ် ။ စိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုပါတယ် ။ လမ်းလေးက ကြွက်နို့ကုသည်ဘာညာတော့သွားမစမ်းပါနဲ့ ။ ပိုး(infection) ၀င်နိုင်ပါတယ် ။ ခွဲစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးခန်းမှာ စနစ်တကျနဲ့ ပိုးသတ်ဆေး (antibiotic)သောက်ပြီးလုပ်တာပိုကောင်းပါတယ် ။
ဒေါက်တာသက်တန့်ချို ရဲ့ ကျေးဇူးကြီးပါပေတယ်ခင်ဗျာ။ ဆရာဝန်ကောင်းပီသပါပေတယ်ဗျာ။ ရင်ထဲက လိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ ကိုကျေးးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဒေါက်တာသက်တန့်ချို ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘ၀ခရီးသာယာပါစေ.........
ကျနော့်လက်မမှာ ငါးမျက်စိလား ကြွက်နို့လားတော့ မသိဘူး တစ်လုံးပေါက်နေပါတယ်... အရင်ကတော့ သေးသေးလေးပါဘဲ.... နောက်တော့ ကျနော် လက်သည်းညှပ်နဲ့ ညှပ်ထုတ်လိုက်တယ်... ပြန်တက်လာပါတယ်... နောက်တော့ အမြစ်ပါ ပြတ်အောက်ဆိုပြီး အသားပါ ပါအောင် ညှပ်ထုတ်လိုက်တယ်... သွေးတွေထွက်လာတယ်... ဒါပေမဲ့ ပျောက်မသွားဘူး ပြန်တက်လာတယ်.. အရင်ကထက်လည်းကြီးလားတယ်.. ဘယ်လိုကုသရမလဲ ဘယ်လိုပျောက်ကင်းနိုင်မလဲ ဆေးကပ် ဆေးလိမ်းရမယ်ဆို ဆေးညွန်းကို ဘယ်လိုမေးပြီး ၀ယ်လို့ရမလဲဆိုတာ ပြောပေးစေချင်ပါတယ်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာ...
My hubby hadagenital wart at his penis and he removed it with his finger nail andalot of blood came out. After that he made love with me by using condom. After one week, he did not use condom whenever we made love.
Now, as I've got white discharge and I checked with O.G. Pap Smear and Ultra Sound had been made. The result showed CIN1. O.G asked me to check pap Smear after six months or make Biopsy. As I have no time to make Biopsy, I told my OG, I will check by pap smear.
Please advise me should I make biopsy.
Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) ကို Cervical dysplasia နဲ့ Cervical interstitial neoplasia လို့လဲခေါ်တယ်။ တချိန်မှာ အဆင်မသင့်ရင် ကင်ဆာကို ပြောင်းချင် ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ Cervix သားအိမ်အဝ မျက်နှာပြင်မှာ Squamous cells (စကွေးမတ်စ်-ဆဲလ်) တွေက ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်လာတယ်။
CIN ဟာ Cancer မဟုတ်ပါ။ ကုလိုရနိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ အများစုဟာ ဒီအဆင့်မှာဘဲ ငြိမ်သက်နေတယ်။ ကိုယ်ပိုင် Immune system ခုခံအားစနစ်ကနေ ရှင်းထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးမလိုဘူး။ ရာနှုန်း နည်းနည်းကတော့ Cervical cancer ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဖြစ်ရင် Cervical squamous cell carcinoma (SCC) ခေါ်တယ်။
CIN ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ Chronic infection of the cervix သားအိမ်အဝမှာ ရက်ရှည် (အင်ဖက်ရှင်) ပိုးဝင်လို့ဘဲ။ အတိအကျဆိုရင် လိင်လမ်းကနေကူးစက်တဲ့ Sexually transmitted human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးအစား HPV types ၁ဝဝ ကျော်ထဲက ၁၆ နဲ့ ၁၈ ကနေဖြစ်တာအများဆုံးဘဲ။ ဆယ်မျိုးမကကနေ CIN cervical dysplasia ကို ဖြစ်စေပြီး ကျန်တာတွေက Warts ကြွက်နို့ဖြစ်စေတယ်။ Pap" smear လုပ်မှသိတယ်။ လူနာက ဘာမှ မခံစားရဘူး။ လိုအပ်သူတွေကို တခြားစစ်ဆေးနည်းတွေဆက်လုပ်တယ်။ Colposcopy of the cervix နဲ့ Biopsy တွေလုပ်နိုင်တယ်။
CIN ကို 1, 2,3အဆင့်တွေ ခွဲထားတယ်။ အမေရိကားမှာ ၂ သိန်းခွဲကနေ ၁ သန်းလောက်အထိ CIN ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းတယ်။
HPV 16, 18, 31, or 45 အမျိုးအစားတွေ ကူးစက်ခံရရင်၊ ယောက်ျားဖေါ် များရင်၊ ဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်ရင်၊ HIV ပါရှိနေရင်၊ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ကလေးမွေးဘူးရင် ပိုဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်။
CIN-1 ရှိပြီး ဆေးမကုဘဲနေသူထဲက ၇ဝ-၉ဝ%ဟာ ၂ နှစ်နေရင် ပျောက်သွားမယ်။ CIN2ရှိသူ ၅ဝ% ဟာ ၂ နှစ်နေရင် ပျောက်သွားမယ်။
အဆင့်နောက်ပိုင်းရှိနေသူတွေကို Cryocautery, Electrocautery, Laser cautery, Loop electrical excision procedure (LEEP), Cervical conization နည်းတွေသုံးပြီး ကုသတယ်။
ပြန်ဖြစ်နိုင်တာလဲ ၂ဝ% ရှိတယ်။
Thanks for your advice, Saya.
Colposcopy နဲ့သားအိမ်ထဲကိုတော့စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ သားအိမ်အထူလည်းကောင်းပါတယ်၊ ကလေးမမွေးဘူးလို့အလုံးသေးသေးလေး၃ ခုရှိတယ်။ လို.ပြောပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက ကိုယ်တိုင်ဆမ ရထားသူဆရာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့ငယ်စဉ်က အရမ်းပွေခဲ့သူဖြစ်လို့ ဆစ်ဖလစ်(2)ကြိမ်ကုသခဲ့ရ ဘူးကြောင်းသိရတဲ့အပြင်၊ ကာမဆက်ဆံပြီးချိန် သုတ်လွှတ်တဲ့အခါမှာ သုတ်ရည်နဲ့အတူ သွေး ပါတတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မပိုပြီးစိုးရိမ်မိ ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ Body Weight က Over 200LB ရှိနေတယ်။ PID နဲ့ Lumber Spondylosis ရှိပြီး ရံဖန်ရံခါခါးနာတတ်လို့ပိုစိတ်ပူမိပါတယ်။
Colposcopy နဲ့သားအိမ်ထဲကိုတော့စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ သားအိမ်အထူလည်းကောင်းပါတယ်၊ ကလေး မမွေးဘူးလို့အလုံးသေးသေးလေး၃ ခုရှိတယ်။ လို.ပြောပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက ကိုယ်တိုင်ဆမ ရထားသူဆရာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့ငယ်စဉ်က အရမ်း ပွေခဲ့သူဖြစ်လို့ ဆစ်ဖလစ်(2)ကြိမ်ကုသခဲ့ရ ဘူးကြောင်းသိရတဲ့အပြင်၊ ကာမဆက်ဆံပြီးချိန် သုတ်လွှတ်တဲ့အခါမှာ သုတ်ရည်နဲ့အတူ သွေး ပါတတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မပိုပြီးစိုးရိမ်မိ ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ Body Weight က Over 200LB ရှိနေတယ်။ PID နဲ့ Lumber Spondylosis ရှိပြီး ရံဖန်ရံခါ ခါးနာတတ်လို့ပိုစိတ်ပူမိပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းကို ဒီနေရာမှာ မတွေ့ဘဲ ကျွန်တော့် (အီးမေးလ်) ဆီရောက်လာတယ်။ တိုက်ရိုက်လဲ ဖြေဘ်ု့ (အီးမေးလ်) လိပ်စာ မပါလို့
Sperm Color သုက်၏အရောင် နှင့် Hematospermia သုက်ထဲသွေးပါခြင်း http://www.yamunaclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=452:sperm-color-hematospermia-&catid=34:adult-readings&Itemid=49 မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
KM H said...
ဆရာ Dr.Tint Swe နှင့်ဆရာမ သက်တန့်ချို ကျွန်တော် သိချင်တာလေးတစ်ခုမေးချင်လို့ပါ။ Salicyclic acid ပါတဲ့ Durasal ကိုအမျိုးသားစအို နှင့် အမျိုးသမီးအင်္ဂါအတွင်းအပြင်မှာ ကြွက်နို့ဖြစ်ရင်ကော treatment အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါသလားခင်ဗျား။ဆေးဆိုင်မှာ ဘယ်လိုနာမည်ပြောပြီးဝယ်ရင်ရနိုင်ဘာမလဲ။ မိန်းကလေး နဲ့ ယောကျာ်းလေးtreatment တူတူပါ ဘဲလား။ သေချာလေးသိချင်ပါတယ်။ အပြောအဆိုမှားတာများရှိခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျား။
အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါမာဖြစ်တဲ့ ကြွက်နို့ကို ဖြတ်တောက်ကုသမယ်ဆိုရင် အမြစ်ပြတ်နိုင်ပါသလားဗျ